Sidee baad ku ogaan in iPhone aad iibsanayso waa run ahaantii cusub? Ama, haddii aad iibsanayso iPhone gacan labaad, sidee ayaad u xukumi haddii uu dayac tiray ama inaan la siin?
Mobiilka iPhone ama dayac tiray yihiin repacked telefoonada sameeyey heli karaa iib by tufaaxa. Telefoonada waxay inta badan loo celin ama is dhaafsadeen telefoonada, kuwaas oo ku xigtayna waxaa cusboonaysiiyey farsamayaqaan Apple oo shahaado sidii si buuxda u shaqaysa. Si kastaba ha ahaatee, dad badan oo iibiyaha isku dayi lahaa in ay iska iibiso sidii qori qalab cusub. Sidaa awgeed, waxaa muhiim ah in la ogaado in la ogaado sida ugu iPhone dayac tiray (macruufka 9 taageeray). Ka hor inta aadan garanayn sidii ay u ogaan, aan aragno waxa ay yihiin khasaaraha haddii aad qorsheyneyso in ay soo iibsato mid.
1. Inta badan telefoonada kuwaas qaado qaybo bedelka, kuwaas oo aan lahayn nolol shelf weyn sida qaybo asal ah.
2. Phones laga yaabaa in ay weli qaadaan cilladaha, kaas oo wax dhacaan oo kartaa waayo-aragnimo iPhone.
3. damaanad ayaa la iPhone dayac tiray ma daboosho wax ugu markuu wax qariyo ee iPhone cusub.
4. Guud ahaan, ma filan kartid haddii karaa nolosha isla dayac tiray iPhone sida telefoonada cusub.
Sida loo aqoonsado iPhone korsocod ah?
Apple ma cadeynayaa in la sameeyo iPhone this dayac tiray si aad u iibsami laakiin iibiya qaar ka mid ah khiyaameeyaan laga yaabaa in macaamiisha ay ka iibiyaan sida telefoonka cusub. Waa in aad ku gartaan si loo aqoonsado phone this dayac tiray.
1. Waxa ugu horeeya ee aad samaynaysaa waa raadiyo tufaax shahaado shaabad ku xirmo telefoonka. Shahaado Tani waxay muujinaysaa in Apple ayaa ansixiyay telefoonka si buuxda u howlgasho iyo dayactir waxaa sameeya farsamo tufaax shahaado.
2. Ka fiiri sanduuqa iPhone ee. Waa in aan ogaado in mobiilka iPhone ama dayac tiray ee had iyo jeer soo sanduuqyada cad ama baakada oo kaliya. Waa iPhone baakada ku tilmaamay.
3. Tani waa talaabada ugu muhiimsan ee halka hubinta telefoonka. Tag dejinta telefoonka, ka dibna guud oo taga si ku saabsan. Tubada tirada taxanaha ah si ay u arkaan tirada taxanaha ah ee iPhone. Haddii phone damiso aad ka arki kartaa tirada taxanaha ah ee saxaarad SIM. Tirada la sidoo kale lagu daabici doonaa kiiska dib.
4. imtixaan tirada taxanaha ah iPhone ee si sax ah. Lambarkan taxan badan ee wax ku saabsan telefoonka sheegi doonaa. Apple shahaado telefoonada dayac tiray bilaabmaan "5" sida ishiisa inankeeda, had iyo jeer wax ka beddelo tirada asalka ah ka dib markii dib u telefoonka. Haddaba bal fiiriya lambar saddexaad, waxa ay muujinaysaa xogta saarka ah. Tusaale ahaan, waa 9 ka dibna waxaa la soo saaray sanadkii 2009. Wixii iPhone 6 waxa ay noqon doontaa 4 ama 5. Hadda baari lambar saddexaad iyo kan afraad, waxay ku tusi doonaa taas oo bishii telefoonka la soo saaray.
1. Marka hore waa in aad wax samayso waa raadiyo seal Apple oo ku saabsan xirmo telefoonka.
2. Ka fiiri sanduuqa. Sida dhammaan taleefanada dayac tiray, 5 iPhone ayaa sidoo kale ku yimaado xirxirida sanduuqa cad. Intaa waxaa dheer, hubi waxa la tilmaamay iPhone.
3. Tag oo ku saabsan in goobaha ay u badan oo ku saabsan telefoonka og. Tubada tirada taxanaha ah si ay u badan oo ku saabsan aqoonsiga telefoonada bartaan. Haddii telefoonka waa off, waxaad had iyo jeer hubi karin on saxaarad SIM ah.
4. Hadda baaro tirada taxanaha ah, haddii ay tahay iPhone 5 ama aan. Haddii uu ka bilowdo ka "5" waxaa la dayac tiray oo aan arko lambar saddexaad, afaraad iyo shanaad si uu u ogaado marka telefoonka la soo saaray. Tani caawimo aad u ogaato da'da telefoonka.
In ay mid ka mid ah waayeelladii, waxay leeyihiin boqolkiiba sare ee telefoonada dayac tiray. Si kastaba ha ahaatee, habka aad ka heli isku mid.
1. U fiirso shahaado seal Apple oo ku saabsan sanduuqa si uu u ogaado haddii ay telefoonka waxaa lagu dayac tiray.
2. Dhammaan telefoonada dayac tiray soo sanduuqyada cad Halkan ka fiiri sanduuqa. Intaa waxaa dheer, eegto xaaladda sanduuqa. Mararka qaarkood waxaa laga yaabaa in sanduuqyada jir ah, sababtoo ah telefoonka ayaa laga yaabaa in lagu fariisin markii is-dheer ah.
3. Ogow tirada taxanaha ka telefoonka. Bal eega, waxaa ka on goobaha ku saabsan ama saxaarad SIM.
4. imtixaan tirada taxanaha ah in la ogaado marka telefoonka la soo saaray iyo markii la dayac tiray.
The lambarka aqoonsiga mar walba idin tusin marka telefoonka la dayac tiray. Had iyo jeer fiiri in sheyga soo iibsadaan ka iibiya ee la isku hallayn karo si looga fogaado in la khiyaameeyay.
Waxa la sameeyo haddii aad soo iibsatay dayac tiray iPhone ah?
Waxaa had iyo jeer waa kuwa caqliga leh si ay u isticmaalaan telefoonada cusub, laakiin haddii aad iibsatay iPhone dayac tiray si qalad ah, waxaa laga yaabaa inaad la xayiran la. Taas micnaheedu ma aha in aanad u isticmaali karin. Waxaad weli u isticmaali kartaa. Talooyin Ka dib way ku caawin doonaan.
1. Fadlan hubi batteriga in uu yahay mid fiican oo cusub. Haddii aad batteriga waa bedelo, hubi in aad hesho mid ka mid cusub asalka iyo bedelo si ay u leedahay nolosha celcelis ahaan baytari Timid telefoonka.
2. Waxaad hubisaa in aad isticmaasho khayraadka mobile si hufan sida telefoon kasta oo kale. Ha rakibi barnaamijyadooda aan loo baahnayn in aadan u baahan yihiin, iyo sii RAM sida lacag la'aan ah intii suurto gal ah. Taas macnaheedu waa in aad u baahan tahay si looga fogaado in barnaamijyadooda badan waqti isku mid ah. Haddii uusan u dhaqaaqin app cusub, xasuuso inaad xirto app hore ka soo jeeda.
3. Ilaali shaashadda xitaa haddii telefoonka wuxuu la iman doonaa bakhtiyo Glass ama qalab kale oo ka dhigaya shaashadda 'xoog'. Idinkuna ma waxaad doonaysaan in aad ku xoqin screen oo aad u cid sababtoo ah waxa ay noqon kartaa mid qaali ah si aad u bedeli shaashadda aan damaanad.
4. Isticmaal software utility in ay sii waxaad wici ammaan ka virus iyo junk files. Marna gashato xisbiga saddexaad.
> Resource > iPhone > Sida loo aqoonsado iPhone dayac tiray